समिक्षाको दोधारे स्टाटस : पहिला पलसँग अनैतिक सम्बन्ध छैन भन्ने, फेरि भनाइ खारेजी गर्ने ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । गायिका समिक्षा अधिकारी र नायक पल शाहबीचको विवाद पुन: सतहमा आएको छ । सन् २०२१ अक्टोबर २४ मा गायिका अधिकारीले निकै लामो स्टाटस लेखेपछि पल र उनीबीचको विवाद साम्य भएको थियो ।
उनले त्यो बेला पलसँग एक कलाकारको सम्बन्ध र अभिभावकको जस्तो सम्बन्ध रहेको भनेपछि कलह साम्य भएको थियो । तर बिहीबार उनले एक्कासि अक्टोबर २१ को स्टाटसको स्क्रीन सट राखेर अर्को स्टाटास लेखेकी छन् ।
उनले पहिलेकै विषयलाई समस्याको रुपमा उठाउँदै पलसँगको असन्तुष्टि पोखेकी छन् । र, लामो कुरा नगरी चाँडोभन्दा चाँडो यथार्थ खुलाउने उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले २०२१ अक्टोबर २४ मा आफै अनि आफ्नै फेसबुक वालमा राखेको लामो स्टाटसको भाव आफैले खारेजी गरेकी हुन् ।
पहिलेको स्टाटसको स्क्रिन सट र यो स्टाटसले पल र समिक्षाको सम्बन्धबारे निकै गहिरो रहस्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि समिक्षाले पहिले पल र आफूमा कुनै प्रकारको अनैतिक सम्बन्ध नरहेको भन्दै स्टाटस लेखेकी थिइन् । नैतिक र अनैतिकताको कुरा समिक्षालाई अरु कसैले साेधेकाे भनेकाे हाेइन उनले आफै स्टाटसमा उक्त शब्द उल्लेख गरेकी हुन् । उनले आफूहरुबीचको सम्बन्ध अभिभावक र छोरा छोरीको जस्तै भएको पनि उल्लेख गरेकी थिइन् ।
त्यतिमात्रै होइन उनले आफूहरुको बारेमा लेख्ने मिडियाहरुलाई झुट भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले पल र आफूबिचको सम्बन्धलाई तोडमोड गरिएको आरोप लगाउँदै मिडियालाई तुच्छसमेत भन्न भ्याइन् । तर अहिले उक्त स्टाटस कसैको अनुनयले लेखेको भन्दै आफ्नै भनाइ खारेजी गरेकी छन् । याे उनकाे दुईजिब्रे बाेलीले आफ्नै कमजोरी सावित हुने देखिन्छ ।
२४ अक्टोबरको समिक्षाको स्टाटस
समाचारमा मेरो र पल जीको सम्बन्धलाई तोड मोड गरेर तुच्छ प्रकारका कुराहरु मिडिया मा आएका छन । जसले मेरो चरित्र हत्या भएको छ । यसका साथ साथै पल जी को क्यारिअरमाथि आँच आउने किसिमले सस्तो प्रचारबाजि गरिराको छन् । यसो नगर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। बिना स्रोत अफबाह मा लेखिएका यी समाचारले हामिलाई सामाजिक र चारितृक रुपमा निकै नै असर पुराएको छ । यस कुरा प्रती म र मेरो परिवार खेद प्रकट गर्दछौ । एउटै इण्डसट्रीजमा भएको हिसाबले पल जी ले मलाई अभिभावकको हिसाबले माया गर्नुहुन्छ । मेरो कला र क्षमता लाई माया संरक्षण गर्नुहुन्छ म उहाको सदैव फ्यान पनि हु। र, हजुरहरुको माया रहेसम्म सधै राम्रो काम गरिरहने छौ। राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारिता का अग्रज र दिग्गज अभिभावक हरुले पनि यसरी मान हानी र चरित्र हत्या हुने किसिमले लेखिएका समाचार ले निकै दुखी छु। मैले यो अपेक्षा गरेको थिएन ।
अन्त्यमा सम्पुर्ण पत्रकार ज्युहरु लाई पनि हार्दिक निबेदन गर्न चाहन्छु कसैको व्यक्त्तिगत जिवनमा आच आउने मान हानी तथा चरित्रहीन हुने किसिमको समाचार नबनाउनु होला।
के हो समिक्षा र पलको विवाद ?
कोरोना महामारी बढेसँगै नायक पल शाह सामाजिक कार्यमा जुटेका थिए । त्यही क्रममा पल विभिन्न कार्यक्रममा हिँड्ने गरेका थिए । सोही क्रममा पल र गायिका समिक्षाबीच भेट भयो । त्यसपछि एकै फिल्ड भएकाले सँगै कामग गर्ने अवसरहरु प्राप्त हुँदै गयो । उनीहरु सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्न थाले । सामिप्यता निकै गहिरो भयो ।